Serbia: Fihetseham-po noho ny Tantaran’ireo Serba Mpikarama an’ady Any Libya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2011 13:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Français, Italiano, Aymara, Português, Magyar, srpski, 繁體中文, 简体中文, polski, македонски, English
fiainana andavanandro Serbiana 'Alo' mitondra ny sarina mersenera Serbiana any Libya.
Fanampiny (28 Febroary 2011):
Roa andro taorian'ny namoahan'ny Global Voices published ity tantara ity dia namoaka fanambarana Serba misahana ny fiarovana ny 25 Febroary 2011 mandà ny fisian'izany miaramila Serba tafiditra amin'ity raharaha ity izany. Nivoaka tao amin'ny Reuters hoy ny voalazan'ny Minisitry ny fiarovana,
“Tsy misy miaramila am-perinasa na miaramila misotro ronono tafiditra amin'ny tranga niseho tany Libya izany ary lavinay izay voalaza rehetra any amin'ny gazety isan-karazany any.”
Na izany aza ny tranonkala Libyan manohitra ny fitondrana al Youm dia nitatitra amin'ny 27 February, 2011, ny filazan'ny radio Serba BIR ny fiaingan'ny voromby mitondra mpikarama an'ady niainga avy tao amin'ny Repoblika Serba ary handrava ny fihetsiketsehana any Libya.
Raha ny filazan'ny bilaogy Malte Malta CC, dia mandray anjara amin'ny fandarohana baomba ny mpanao fihetsiketsehana any amin'ny tanana Libiana any Tripoli sy Benghazi ny miaramila Serba mpanamory fiaramanidina. Nato fanta-bahoaka ty fanambaràna ity taorian'ny nitsoahan'ny mpanamory fiaramanidina Libiana roa nankany Malta, manda tsy handaroka baomba ireo mpiray tanindrazana aminy mandray anjara amin'ny fitroaran'i Libia.
Mampahatsiahy ny mpamaky azy ny gazety Serbiana mpivoaka isan'andro Alo fa nanarama mpanamory fiaramanidina Serba i Muammar al-Gaddafi taloha: tamin'ny taona faha 90, tamin'ny ady nataony tamin'ireo Islamista, ary koa tamin'ny hetsika nanoherana ny sivily, nanohanana ny hery an-tanety.
Eo amin'io lahatsoratra io ihany, milaza i Alo fa tena namonovona tsy misy lanjany ny mpanao fihetsiketsehana teny an-dalamben'i Tripoli sy Benghazi ny ireo Serba mpikarama an'ady:
Mahazo dolara analiny ireo Serba mpikarama an'ady amin'ity asa ity… Avy any Serbia izy ireo, fa voakitika ao ihany koa ny masoivoho Bosniaka sy Kroaty tamin'ny nandraisana an'ireo olona ireo hanao ity karazana asa ity…Efa nanana lazon'ady noho ny ady tany Yogoslavia taloha daholo ireo “lezionera Serba” . Ankoatr'ireo mpikambana taloha tao amin'ny fiombonan'ny miaramila sy polisy, ny tena tanjak'ity hery ity dia ny [“Satroka Mena teo aloha”]… Nokaramain'i Gaddafi lafobe izy ireo araka ny nangatahiny! Maro amin'izy ireo no nahazo asa nahazoam-bola be amin'ny firenena Afrikana maro samihafa, fa ity kosa dia tolotra tena tsy natao ho lavina mihitsy. Afaka andrandraina hoe atsy ho atsy, mpanao fifanarahana maro no hiaraka amin'i Gaddafi, izay tena matoky tsara ny miaramila Serba.
Hita fa ireo Serba mponin'ny aterineto dia toa tsy taitra loatra amin'itony fanaratsiana sy ny ampamoaka itony. Iray amin'ireo tonga matanjaka amin'ny adihevitra ny sehatra fifanakalozan-dresaka Krstarica.
Manoratra i Reg :
Tsy mahagaga, ry vahoaka. Ataon'ny matihanina daholo ny zavatra rehetra hahazoam-bola…Tsy misy fo mitepo, tsy misy fandinihina… Mamono ho an'izay manome mihoatra. Tamin'ireo ady tany Yogoslavia taloha, niara-niasa tamin'ny Kroaty, Silamo izy ireo ary maninona moa izy ireo amin'izao no tsy hiara-hiasa amin'i Gaddafi. Tsy mampaninona azy ireo mihitsy hoe iza no lehibeny.
Manoratra i Sicilian:
Mety e! Nanohana ny Serba foana i Gaddafi…
Manamarika i Soko:
Toa ny Serba no itokiany kokoa … Tsy nankato an'i Kosovo i Libia, ary dia antony iray izay hanohanana an'i Gaddafi.
Manontany i Neca 1977:
Ahoana no atao raha te ho lasa mpikarama an'adin'i Gaddafi?
Manamarika i Mika Egzekutor:
Mahita asa ankehitriny ireo Bosniaka sy Kroaty ho an'ireo izay nitifitra azy omaly.
Donald 1408, miaramila Serba, dia mamerina miantso:
Hey, ry rahalahy hajaina, inona ny hafahafa amin'izany? Izaho manokana dia mahafantatra, fony izaho mbola tany amin'ny sekoly miaramila, nisy Libiana, Irakiana, Zambiana, Palestiniana ihany koa tany… fantatro fa misy azy ireo koa any amin'ireo Sekoly [miaramila] Rosiana. Tia ny sekoly any Yogoslavia ny miaramila matihanin'i Gaddafi… Hainy ny maka ny tena mahay hiaraka amin'ny tafika Libiana… Betsaka no tonga manampy ny Libiana aminà fifanarahana manokana… […] Raha izaho manokana, efa nahazo tolotra ny hoany aho, ary maro ireo namako no fantatro fa nankany…
Nandalina ny fidiran'ny “alikan'ady” Serba any Libia ihany koa ny mpitsidika eo amin'ny sehapifaneraseran'ny farany havanana “Stormfront”.
Hoy i Iraklija:
Ireto misy zavatra vitsivitsy izay henoko avy amin'ny olona niasa tamin'ny Legiona Any ivelany ary nanjary ho miaramila mpikarama an'ady miasa irery taty aoriana. Ireto no azonao raha lasa mpikarama an'ady any Libia ianao:
1. lelavola $10,000-$20,000 isam-bolana
3. Vady sy makorelina
4. medaly volamena
5. Fotoana iray hiasana ao amin'ny sampam-piarovana an'i Gaddafi na fiarovana ny ao anatin'ny fianakavian'i Gaddafi
[…] Serbia: Fihetseham-po noho ny Tantaran'ireo Serba Mpikarama an'ady Any Libya [mg] […]
09 Janoary 2012, 11:47